Xildhibaan Fiqi oo Ciidanka DFS ee tagay Cadaado sheegay in ay ahayd in ay Al-Shabaab la dagaalaan – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya, ayaa ugu baaqay in Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ee la wareegay amaanka Madaxtooyadii Galmudug ee Cadaado ay ka baxaan halkaas. Waxa uu u soo jeediyey in ay la gudboon tahay in ay qabsadaan dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan.
“Ciidamada magaca qaranka wata waxaan ugu baaqaynaa in ay hawlaha siyaasadda ka baxaan” ayuu Xildhibaan Fiqi ku yiri dhigaal uu kusoo daabacay Feysbuuggiisa. “Haddii ay dhul qabsanayaan waxaa jira dhul ballaaran oo gacanta Al-shabaab ku jira” ayuu Fiqi raaciyey hadalkiisa.
Waxa uu sheegay in aysan Filla Soomaaliya uga dhigi karin guul ay Soomaaliya gaartay in ay ciidanka DFS qabsadaan Xarrumo Dowlad Goboleed, sida uu hadalka u dhigay. “Waa tallaabo kale oo qaldan oo ah damac indhaha la’ ee Filla Soomaaliya uu garwadeen ka yahay in Xaruntii Madaxtooyada Cadaado lagu qabsado ciidamada NISA iyo XDS ee qeybta 21-aad” ayuu ku yiri dhigaalkiisa.
Xildhibaanka, oo ay caadi u tahay dhaliilidda Siyaasadda Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay in ay DFS ku fashilantay amaanka Muqdisho, haddana ay dooneyso xakha cid kale, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxay tani ka marqaati kacaysaa in Madaxweyne Farmaajo kursigii Filla Soomaaliya uu ku filnaan waayey, oo kuraastii dawlad goboleedyada uu hunguri ka galay, ayadoo uu hanan la’ yahay oo uu ku fashilmay amniga Muqdisho” ayuu ku Xildhibaan Fiqi ku yiri qormadiisa.